Misy tsipika eo amin'ny efijery iPhone-ko! Ity ny The Fix. - Iphone
ahoana no fomba fisintomako ny apps
fampiharana tsy hanavao amin'ny iphone
nijanona ny fifandraisana amin'ny wifi i iphone
mampirehitra imessage iphone 5
maninona ny ipad ko no milaza fa tsy mandoa vola
Misy tsipika eo amin'ny efijery iPhone-ko! Ity ny The Fix.
Mahita tsipika eo amin'ny efijery iPhone-nao ianao ary tsy azonao antoka ny antony. Matetika io olana io dia mitranga rehefa tapaka ny fantsom-pifandraisan'ny LCD an'ny iPhone amin'ny tabilao lojika, saingy mety ho olana amin'ny lozisialy ihany koa izany. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao ny antony misy tsipika eo amin'ny efijery iPhone anao ary asehoy anao ny fomba fanamboarana ny olana ho tsara !
Voalohany, andao andramo ary esorina ny glitch rindrambaiko madinidinika. Ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone dia hamela ny programa rehetra hikatona ara-dalàna, izay mety hamaha olana miteraka tsipika miseho amin'ny fampisehoana iPhone.
Raha manana maodely iPhone 8 na mihoatra ianao dia tsindrio ary tazomy mandra-pahatapitry ny bokotra herinaratra solafaka hiala amin'ny herinaratra hita eo amin'ny efijery. Amin'ny iPhone X na maodely vaovao kokoa, tsindrio miaraka ary tazomy ny bokotra volume sy ny bokotra aorinan'ny solafaka hiala amin'ny herinaratra miseho.
Esory ny kisary hery fotsy sy mena avy eo ankavia miankavanana hanakatonana ny iPhone-nao. Andraso segondra vitsy, avy eo tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra (iPhone 8 sy aloha kokoa) na ny bokotra eo anilany (iPhone X sy ny vaovao kokoa) mandra-pisehon'ny Apple logo eo afovoan'ny fampisehoana.
Amin'ny tranga sasany, ny tsipika eo amin'ny efijery iPhone dia ho sakana loatra ka tsy afaka mahita na inona na inona eo amin'ny efijery ianao. Raha manakana tanteraka ny fomba fijerinao ireo tsipika eo amin'ny efijery iPhone anao dia azonao atao ny mamerina azy io amin'ny alàlan'ny famerenanao mafy. Ny famerenana mafy dia tampoka tampoka dia manidy ny iPhone sy miverina.
Ny fomba famerenana mafy iPhone dia miankina amin'ny iPhone anananao:
iPhone 6s sy maodely taloha : Tsindrio miaraka hatrany ny bokotra Home sy ny bokotra herinaratra mandra-pahitanao ny fangon'ny Apple logo eo amin'ny efijery.
iPhone 7 sy iPhone 7 Plus : Tsindrio ary tazomy ny bokotra midina sy ny bokotra herinaratra mandra-pivoaky ny logo Apple eo afovoan'ny efijery.
iPhone 8 sy maodely vaovao : Tsindrio haingana ary alefaso ny bokotra miakatra ambony, avy eo ny bokotra midina, avy eo tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny. Rehefa miseho eo amin'ny fampisehoana ny sary famantarana Apple dia alefaso ny bokotra sisiny.
Afaka maharitra 25-30 segondra alohan'ny hisehoan'ny Apple logo, dia mahareta ary aza milavo lefona!
Kitiho ny iPhone
Manoro hevitra ny hamerenanao haingana ny iPhone faran'izay haingana ianao raha mbola misy tsipika eo amin'ny efijery. Mety ho io no fotoana farany farany hiverenanao raha simbaina mafy na mijaly noho ny fanimbana rano ny iPhone-nao.
Ny famerenanao ny iPhone dia mamonjy kopian'ny fampahalalana rehetra ao. Anisan'izany ny sarinao, ny fifandraisanao, ny horonan-tsarinao ary maro hafa!
Azonao atao ny mampiasa iTunes na iCloud hanohana ny iPhone-nao. Mila tariby Lightning sy solosaina misy iTunes ianao avereno amin'ny iTunes ny iPhone . Raha izay no tianao avereno amin'ny iPhone ny iPhone , tsy mila tariby na solosaina ianao, fa mila toerana fitahirizana iCloud ampy hipetrahana ny backup.
Ny famerenana ny Device Firmware Update (DFU) no karazana famerenana amin'ny laoniny iPhone ary io no dingana farany azontsika raisina mba hialana amin'ny olan'ny lozisialy. Ny karazana famerenana amin'ny laoniny dia mamafa sy mamerina ny kaody rehetra amin'ny iPhone anao, mamerina azy io amin'ny fivarotan'ny orinasa.
Manoro hevitra mafy izahay mitahiry backup ny vaovao ao amin'ny iPhone alohan'ny hametrahana azy amin'ny maody DFU. Zahao ny torolàlana tsikelikely anay rehefa vonona ianao apetraho amin'ny maody DFU ny iPhone-nao !
Safidy fanamboarana efijery
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny tsipika eo amin'ny efijery iPhone-nao dia vokatry ny olan'ny fitaovana. Mety hitranga izany rehefa mandatsaka ny iPhone amin'ny faritra sarotra ianao, na raha misedra ranon-javatra ny iPhone. Ny tsipika mitsangana amin'ny fampisehoana ny iPhone dia matetika famantarana fa tsy mifamatotra amin'ny tabilaon'ny lojika intsony ny tariby LCD.
Manangana fotoana ao amin'ny Apple Store anao eo an-toerana hihaona amin'ny teknisianina, indrindra raha rakotra AppleCare + Protection Plan ny iPhone-nao. Manoro hevitra ihany koa izahay hanin-kotrana , orinasa fanamboarana an-tsitrapo izay afaka mandefa teknisiana voamarina mivantana ny tranonao na ny biraonao. Izy ireo dia afaka ho eo hanampy anao hamaha ny olana mitsangana amin'ny iPhone ao anatin'ny enim-polo minitra!
Tsy misy tsipika intsony!
Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao nanamboatra ny iPhone na nahita safidy fanamboarana izay hanampy anao hisolo ny efijery faran'izay haingana. Fantatrao izao hoe maninona no misy tsipika eo amin'ny efijery iPhone anao, alao antoka fa hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy amin'ny fianakavianao sy ny namanao ianao! Avelao ny fanontaniana hafa anananao ho anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.